१० दिन क्वारेन्टाइन बसेर घर पुगेका बाबुले छोराछोरी भेट्नै पाएनन्, मामाघर आएका १३ वर्षीय गौरव पनि सधैका लागि अस्ताए ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/१० दिन क्वारेन्टाइन बसेर घर पुगेका बाबुले छोराछोरी भेट्नै पाएनन्, मामाघर आएका १३ वर्षीय गौरव पनि सधैका लागि अस्ताए !
रोल्पा : वि’स्फोटमा छोरा र छोरी गुमाएका रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका-७ गैरीगाउँ मैतेगातिनाका लालबहादुर खत्रीका आँसु थामिएका छैनन्। उनकी पत्नीको हालत पनि उस्तै छ। बिहीबार साँझ उनीहरुका लागि कालो दिन भयो। ११ वर्षीया छोरी विमला र ५ वर्षीय छोरा विजयको वि’स्फोटमा परेर निधन भयो। काखमा दुई वर्षकी छोरी छन्। बाख्रा चराउन जंगल गएका चार बालबालिका साँझ घर फर्किएनन्। १४ वर्षीय छोरा नोखिराम गुमाएका ओजबहादुर डाँगीको परिवार पनि शोकमा डुबेको छ। आमा र छोराछोरी सम्हाल्न धौ धौ परेको छ। त्रिवेणी गाउँपालिका-४ छेपबाट मामाघर आएका १३ वर्षीय गौरव नेपाली सधैका लागि घर नफर्किने गरी ब’मको छर्रासँगै क्ष’तवि’क्ष’त भए।
गौरवका एउटी दिदी घरमा रहेको बुबा लक्ष्मण नेपाली बताउँछन्। निधन भएका चारैजना बालबालिकाको घरमा मात्र होइन गाउँ पुरै शोकमा डुबेको छ। कल्पना नै नगरेको घटनाले गाउँले त्रसितसमेत बनेका छन्। ‘घर नजिकैको गाउँबारीमा रातभर ला’स ल’डि’रहे, बालबालिकाका बुवाआमा, आफन्त र गाउँले आँसुमा डु’विरहेको दृश्य निकैले घटनास्थल पुग्ने जोकोहीको आँखा ओभानो रहेनन्।’, घटनास्थल पुगेका मानवअधिकारवादी संस्थाका हुरेकका संयोजक धरेन्द्र डाँगीले भने। शव उठाउने बेला र घटना स्थलमा फेला परेको नपड्एिको टुईन्च मोर्टारको गो’ली डि’स्पोज नगरुन्जेल घटनास्थलमा पुगेका सबैका आँखा रसाइरहे। बिहानभर आकाश पनि वर्षी रह्यो भने गाउँलेका आँसु पनि बगिरहे।
( तस्बिर सौजन्य – अन्नपूर्ण पोस्ट)
मजदुरीमा गएर फर्किएका लालबहादुरले दुई छोराछोरी सग्लो भेट्न पाएनन्। कोरोनोको महामारीका कारण काठमाडौं इँट्टाभट्टामा अलपत्र परेका उनी ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको टोलीले घर आउन सघाए पनि उनी घर पुग्न सकेका थिएनन्। गाउँ फर्किएकालाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नु प¥यो। उनी छिमेकी ह्याङ विद्यालयमा दश दिन क्वारेन्टाइनमा बसे। ‘क्वारेन्टाइनमा दश दिन बसेर दिउँसो चार बजे घर आएँ। घर आउदा छोराछोरी थिएनन्। गोठालो गएका रैछन्।’, लालबहादुरले आँसु पुछ्दै भने, ‘साँझ ६ बजे वि’स्फो’टको आवाज सुनियो। हेर्न जाँदा छोराछोरी क्ष’तवि’क्षत देखेँ।’
घटनास्थल नजिकै वि’स्फो’टक प’दा’र्थसमेत भएकाले क्ष’तवि’क्षत छोराछोरीको शवलाई समेत सुम्सुम्याउन पाएनन्। ६ महिना अघिदेखि घरबाट टाढा मजदुरीमा गएका उनी परिवारसँग रमाउन पाएनन्। खुशी साट्ने रहर आँसुले पखालियो। पीडित परिवारले घटनाका छानबिन हुनुपर्ने, जंगलमा अरु वि’स्फो’टक प’दा’र्थसमेत हुनसक्ने भएकाले खोजबिन गरिनु पर्ने र उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।
घटनाले जिल्लाबासी नै स्तब्ध बनेका छन्। ‘विगतको यु’द्धमा र’गत ब’ग्यो’, सबैजसोले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘रोल्पाली अभैm कति र’गत बगा’उनु पर्ने हो।’ सरकार, सत्ताधारी पार्टी र सत्ताबाहिरका पार्टीले पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्र्ति दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
(अन्नपूर्ण पोस्ट अनलाइनमा बैसाख १९ गते प्रकासित यो समाचार खेमबहादुर बुढाले लेखेका हुन्, तस्बिर सौजन्य – अन्नपूर्ण पोस्ट)
भारतका कारण सप्तरीको तिलाठी डुबानमा
लकडाउनमा पार्टी का’ण्ड भा’इरल भएपछि रबिले फेरि आजको यस्तो फोटो हाल्दै यस्तो लेखे …